म कलेजको लागि कसरी आवेदन दिन सक्छु? | USAHello
म कलेजको लागि कसरी आवेदन दिन सक्छु?
कलेजको लागि गर्न तयारी समय लाग्छ। यो जीवनको एक रोमाञ्चक कदम हो, तर त्यहाँ धेरै गर्न बाकी छ। त्यसैले तपाइँ कलेजको लागि कसरी आवेदन दिनु हुन्छ?
यदि तपाईं कलेज जान चाहानुहुन्छ भने, हाईस्कूलमा हुनुहुँदा नै तयारी सुरु गर्नुहोस्। धेरै जसो, तपाईले हाईस्कूलमा राम्रो ग्रेड ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले थप गतिविधिहरूमा पनि भाग लिनु पर्छ। यसको अर्थ क्लबहरू, खेलहरू, र थप कक्षाहरू। कलेजहरूले तपाईंको स्वयंसेवक कामलाई पनि हेर्नेछन्। यी चीजहरूले तपाईंलाई कलेजमा जान मद्दत पुर्याउनेछन्।
संयुक्त राज्यमा, मानिसहरु प्रायः भन्छन कि सबै शिक्षाका लागि उच्च विद्यालय वा “कलेज” मात्र माध्यमिक “स्कूल” पछि।
कलेज प्रवेशका आवश्यकताहरू
दुई वर्षको कलेज, चार वर्षको कलेज वा विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्न, तपाईंलाई माध्यमिक विद्यालयको डिप्लोमा चाहिन्छ। यदि तपाईंले माध्यमिक विद्यालय पास गर्नु भयको छैन भने, तपाईं यसको सट्टा माध्यमिक विद्यालय समानता डिप्लोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो स्कूलमा सिकाइएको सबै फरक विषयहरूको बारेमा एक लामो परीक्षण हो। यदि तपाईंले यो पास गर्नुभयो भने, यसले तपाईंलाई कलेजमा जानको लागि पर्याप्त शिक्षा छ भन्ने देखाउछ।
तपाईं आफ्नो माध्यमिक विद्यालय समनताको डिप्लोमा सामुदायिक महाविद्यालयहरूमा कमाउन सक्नुहुन्छ (called GED® or HiSET or TASC)। तपाईं आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरूका लागि साँझ कक्षाहरूमा जान सक्नुहुन्छ वा हाम्रो अनलाइन कक्षा लिन सक्नुहुन्छ।
अनलाइन कक्षा लिन RCO मुक्त GED तयारी कक्षा
सामुदायिक महाविद्यालयहरू जीवनवृति सीपमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। सामुदायिक महाविद्यालयहरूबाट स्नातक गर्ने विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्र वा सम्बद्ध अंशहरू प्राप्त गर्छन्। सम्बद्ध डिग्री कार्यक्रम अध्ययनको लागि लगभग दुई वर्ष लाग्दछ। सामुदायिक महाविद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई जीवित वेतन प्रदान गर्न सक्ने क्यारियर सुरु गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। यसको मतलब मान्छेको लागि पर्याप्त पैसा कमाउन सक्ने पेशा मिल्छ। जीवन बिताउने काम मतलब तपाईंलाई दुई कामको आवश्यकता पर्दैन वा सरकारबाट सहयोको आवस्यकता हुने छैन। केही सामुदायिक महाविद्यालयहरू विद्यार्थीहरूलाई चार-वर्षको महाविद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्ने कार्यक्रमहरू छन्।
सामुदायिक महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरू भन्दा सानो हुन्। तिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई आंशिक-समयमा भाग लिन अनुमति दिन्छन्। तिनीहरू सस्ता पनि हुन्छन्। सामुदायिक कलेजमा एक वर्षको औसत मूल्य $२,००० पर्छ। जहाँकि विश्वविद्यालयमा औसत मूल्य $८,००० पर्छ।
कलेज र विश्वविद्यालय
कलेजहरू र विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश पाउन सामुदायिक महाविद्यालयहरू भन्दा बढी गार्हो हुन्छ। तपाईंले प्रवेश परीक्षा पास गर्नु पर्छ। धेरैजना अमेरिकनहरू विद्यालय पूरा गरे पछि चार वर्षको कलेजमा जान्छन्। विश्वविद्यालय एक महाविद्यालय हो जसले केवल स्नातकको डिग्री मात्र प्रदान गर्दैन तर स्नातक डिग्री (मास्टरको या पीएचडी) पनि प्रदान गर्छ। स्नातक र मास्टर डिग्रीले तपाईंलाई राम्रो काम प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ जब तपाईं स्नातक गर्नुहुन्छ।
सार्वजनिक र निजी
कलेजहरू पनि निजी वा सार्वजनिक विद्यालय हुन सक्छन्। निजी कलेजहरू सार्वजनिक महाविद्यालयहरूको तुलनामा धेरै महगो हुन्छ। प्रति वर्ष औसत लागत $३०,००० हो। तथापि, निजी कलेजहरूमा पनि अधिक छात्रवृत्तिको पैसा उपलब्ध हुन सक्छ। तिनीहरूसँग सानो समूहको विद्यार्थीहरू भयकाले शिक्षकहरूसँग कुराकानी गर्न अधिक समय हुन्छ।
कसरी दरखास्त दिने
तपाईं अक्टोबरमा कलेजको आवेदन दिन सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। जनवरीको अन्त्य सम्म आबेदन दिई सक्नुपर्ने छ। आवेदनहरू भर्न लामो समय लाग्छ। तपाईंले चाँडै सुरु गर्नुपर्छ र ६-८ आवेदनहरू भर्नु पर्छ। कलेजका आवेदनहरू प्रत्येकको लागी $ ४० खर्च लाग्छ, त्यसैले केवल तपाईलाई मनपर्ने स्कूलहरूमा मात्र आवेदन गर्नुहोस्। कलेजहरू उत्कृष्ट शिक्षा पाउनका लागि चिनिने धेरै प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ। यसको अर्थ धेरै विद्यार्थीहरू आवेदन दिन्छन् तर प्रायः प्रवेश प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यदि तपाईं धेरै प्रतिस्पर्धात्मक विद्यालयहरूमा आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ केही विद्यालयहरूमा पनि आवेदन गर्नुहोस जुन सजिलो पनि छ, यदि तपाईं आफ्नो पहिलो छनौटहरूमा पाउनु भएन भने।
यदि तपाईंलाई थाहा छ कुन कुन कलेजमा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ कसरी आवेदन गर्ने बारेमा जान्न यसको वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ।तपाइले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु:
एक अनलाइन आवेदन फारम
व्यक्तिगत विवरण: तपाईं यो स्कूलमा किन जान चाहनु भएको निबंध हो। यो आफ्नो कौशल र ग्रेडको बारेमा कुरा गर्ने एक मौका हो।
दुई वा बढी सिफारिसहरू: पत्रहरू शिक्षकहरू वा व्यक्तिहरूबाट जसको लागि तपाईंले काम गर्नुभएको थियोयी पत्रहरूले भन्नेछन् कि विद्यालयले तपाईंलाई किन प्रवेश दिनु पर्छ।
परीक्षण स्कोर: विश्वविद्यालयको लागि, तपाईंलाई एक SAT वा ACT परीक्षण लिन आवश्यक छ। यिनीहरु स्कूलमा पढेका सबै विषयहरूको टेस्ट हुन्। एक राम्रो अंकले तपाईंलाई कलेजमा जान मद्दत गर्नेछ
यदि तपाइले प्रवेश पाउनु भयो भने
तपाईंले प्रवेश पाउनु भएमा पत्र वा इमेल प्राप्त गर्नु हुनेछ। यो १ मार्च र १ मेको बिचमा हुनेछ। यदि तपाईंले एक भन्दा बढी विद्यालयमा प्रवेश पाउनु भयो भने, तपाईंले कहाँ जाने बारेमा निर्णय गर्नु पर्नेछ। लागत, स्थान, र शिक्षा कस्तो छ भन्ने सोच्नुहोस्। सकेसम्म तपाइँले चाँडैनै विद्यालयहरूमा हो वा होइन निर्णय दिनु पर्छ। यसले तिनीहरूको लागि कुनै स्थान छ भने सुन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका अन्य विद्यार्थीहरूलाई मद्दत गर्नेछ।
यदि तपाइले प्रवेश पाउनु भयन भने
केही विद्यार्थीहरूले पहिलो वर्ष कलेजमा आवेदन दिदा प्रवेश पाउदैनन्। यदि तपाईंले प्रवेश पाउनु भयन भने, विकल्पहरू छन्।
केही महाविद्यालयहरू रोलिंग प्रवेशहरू प्रदान गर्छन्। यसको मतलब तिनीहरूले सबै सिटमा एकै पटक स्वीकार गर्दैनन्। जबसम्म सबै स्पट पुरा हुदैन बरु उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई एक एक गरेर भर्ना लिन्छन्। यदि ठाउँहरू बाँकी छन् भने, तपाईं बिस्तारै वसन्त वा गर्मीमा यी विद्यालयमा आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं एक वर्ष लाग्न र पैसा बचत गर्न काम गर्न निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई एक वर्ष नपढेर पैसा कमाई जोगौना सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग कलेजहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्न र निर्णय गर्न अर्को समय हुनेछ। तपाईं इन्टर्नशिप प्राप्त गर्न वा तपाईंले रुचि राख्नु भएको क्षेत्रमा स्वयंसेवको काम गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। इंटर्नशिप एक अनपेक्षित नोकरी हो। यो अनुभवले तपाईंलाई अर्को पटक प्रवेश पाउन मद्दत गर्नेछ।
कलेजको लागि आवेदन एक लामो प्रक्रिया हुन सक्छ। एक एक गरि कदम लिनुहोस्। यद्यपि यदि तपाईंको बालबालिकाले प्रवेश नपाए पनि, त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन्।
रिफिबरेसन सेन्टर अनलाईनमा थप संसाधनहरू
आप्रवासीहरूको लागि छात्रवृत्ति
कलेजको लागि कसरी भुक्तान गर्ने?
स्वयंसेवक र इन्टर्नशिप कार्यहरू
एक कलेज छनौट – एक पूर्व शरणार्थीको अनुभव
कलेजको लागि आवेदन गर्ने पहिलो-पीढी विद्यार्थीहरूको लागि संसाधन
Undocumented विद्यार्थीहरुको लागि आवेदन कलेजको लागि आवेदन
कलेज सहायता प्रवासी कार्यक्रम (शिविर)
रोलिंग प्रवेशको साथ कलेज